लघुकथा : दुःखको भारी — News of The World
घनेन्द्र ओझा, काठमाण्डौ फागुन २६, २०७४
उफ्, कत्ति चर्को घाम लागेको हो, बुढ्यौलीले हो वा विपन्नताले मुजा परेको निधारबाट पसिना पुछ्दै गन्गनाउँछ, यो पार नपाउने भवसागर । कतिन्जेल बोक्ने दुःखको भारी दुःखको भारी बोक्नु नियति हो उसको, भनूँ न नियमित प्रक्रिया । उसलाई थाहा भएदेखि बोकिरहेको छ यो भारी । उसले सानै हुँदा आफ्नी आमाको दुःख बोक्यो । पाँच वर्षको हुँदा आमाको मृत्यु भयो । त्यसपछि बुबाको । एकपछि अर्को दुःख बोकिरहृयो, वर्षेनी जस्तो । हुर्कंदै गएपछि मालिक र मालिक्नीको दुःखको भारी बोक्यो । साहुका दुःख बोक्यो । दुःख बोक्नु लाग्छ, उसको भाग्य हो, किनभने यसबाहेक उसको पुर्पुरोमा अन्य कुरा लेखिएको थाहा छैन । केही खुसीको सपना देख्यो, विवाह, सन्तान र सुखद भविष्य । विवाह ग¥यो । सन्तान जन्मायो । धेरै समय रहेन उसको खुसी, आखिर दुःखको भारी त सँगै नै थियो । श्रीमतीको मृत्यु भयो । केही समयपछि छोरो बित्यो । दिनभर भारी बोक्ने काम गर्छ ऊ । सहरका विभिन्न ठाउँमा सामानहरु बोकेर पु¥याइदिन्छ । दिनभरमा राम्रै हुन्छ कमाइ । एक्लो छ, सानो कोठा लिएको छ भाडामा, सहरको एउटा गल्लीमा । पैसामा अलिक लोभी नै हो कि, प्रायः खाजा खाँदैन । खर्चका नाममा दिनको एक बट्टा विजुली चुरोट । चुरोटमा चाहिँ लोभ गर्दैन । घर भाडा र खाना खर्च त नियमित नै भैहाल्यो । पैसा जम्मा गरेकै हो, दुई चार लाख छ रे बैंकमा । सोच्दै छ, अलिकति जमिन किनूँ, कतै सस्तो–स्तोमा । फेरि घर बनाएर बस्ने त सपनै हुने हो कि, सम्झन्छ । तै पनि एउटा सानो झुप्रोको सपना जीवित छ उसमा । आ…, आखिर कसका लागि जोड्नु घर सर, कुनै बेला यस्तो पनि आउँछ सोचाइमा । फेरि गम्छ, आखिर भर्खर त पचासको लाइनमा छु, घर भए छोरी दिने पनि त आउलान्, नभए कोही विधवा वा एकल जीवन बिताएका महिला भए पनि फकाउन सकिएला ।
काठमाडौँमा मात्र होइन, देशभर घर जग्गा किनबेचमा मन्दी छ अहिले । बेचबिखन हुँदै नभएको त होइन, मानिस घाटाको व्यापार गर्न चाहँदैन । महँगिएको बेलामा किनेका जग्गा सस्तिएको बेला कसले बेच्छ ? तै पनि काठमाडौँभित्रै सानो टुक्र जग्गा किन्ने निर्णय ग¥यो उसले । निकै खोज्यो जग्गा । ९ लाख भन्दा तल पाउन गाह्रो । आफूसँग भएको पैसा सम्झ्यो, जम्मा ६ लाख । अन्ततः काठमाडौँ सहरदेखि थोरै टाढा, त्यति टाढा पनि होइन, रामकोटमा साढे दुई आना जग्गा किन्यो । जग्गाको धनीपूर्जा हातमा लिएको दिन, एकछिन बिर्सिदियो सबै अतीत । लाग्थ्यो, उसको जीवनमा कुनै अभाव छैन, असन्तुष्टि छैन, दुःख छैन । रातभर छातिमा धनिपूर्जा टाँसेर सुत्यो ।
‘श्रीमती र दुई छोरा लिएर घुम्न निस्कियो ऊ । आफ्नै कारमा । आफैँले ड्राइभ ग¥यो गाडी । भर्खरै किनेको हो, १७ लाखमा । चार जना अटाउने गाडी, राम्रो मोडेलको । टाइसुट, राडो घडी र कालो चस्मामा सजिएको पायो आफूलाई । लुकिंग ग्लासतिर हे¥यो र मुस्कुरायो । छेउमा रहेकी श्रीमतीलाई नियाल्यो । ओहो, कति सुन्दर, कति हिस्सी । पछाडिपट्टि बसेका दुई छोरा फूलका थुंगा जस्ता ।
कलंकी, चक्रपथको बाटो हुँदै सातदोबाटो, कोटेश्वर, सूर्यविनायक हुँदै मोडियो कार, नगरकोटका लागि । ओहो, क्या सुन्दर यी डाँडाहरु, चिसो हावाले स्पर्श गरेका श्रीमतीका गाला नियाल्छ पुलुक्क । झनै सुन्दर देखिएकी छे आज, त्यसो त हिजो पनि नराम्री थिइन ऊ । आफ्नै धुनमा खेलिरहेका, गफ गरिरहेका छन् छोराहरु पछिल्लो सिटमा । घच्याक् घच्याक् घच्याक्, एक्कासी अगाडिको चक्काले बाटो छाडेछ । कार पल्टिन थाल्यो वा… इ.., वा… इ…’
निक्कै ठूलो चिच्याहट सुनेर पल्लो कोठाको साथी हर्कमानले ढोका ढक्ढक्यायो, वीरु, ए वीरु, के भो ? हँ, हँ भन्दै उठ्यो वीरु । ओहो, कस्तो भयानक सपना ! निधारभरि पसिनाले लुछुप्पै भिजेको थियो । तौलियाले पसिना पुछ्यो । नाडीमा बाँधिराखेको पिलपिले घडी हे¥यो, चार बजेको रहेछ । उठ्यो र एक मग पानी पियो । ढोका बिस्तारै खोल्यो । के भो वीरु ? किन चिच्याएको ? हर्कमानले सोधेको प्रश्नको उत्तर त दिएन हर्कमानलाई अँगालो मारेर रोइरहृयो धेरैबेरसम्म । भन्यो, साला सपनाले समेत भारी बोकायो दुःखको ।